चीनको सैन्य शक्ति विस्तारमा अष्ट्रेलियाको चासो « लुम्बिनी सञ्चार
चीनको सैन्य शक्ति विस्तारमा अष्ट्रेलियाको चासो
प्रकाशित मिति : 22 April, 2021 3:03 pm
क्यानबेरा । कोभिड १९ माहामारीका बाबजुद चीनले ६ दशमलब ८ प्रतिशतले रक्षा बजेट वृद्धि गरेको छ ।कोभिड १९ माहामारीमा आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरका बाबजुद चीनले रक्षा बजेट दुई सय ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर बनाएको हो ।
यो बजेट गत बर्षको दुई सय ६१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भन्दा ६ दशमलब ८ प्रतिशतले धेरै हो । गत बर्ष पनि ६ दशमलब ६ प्रतिशतले चीनले रक्षा बजेट वृद्धि गरेको थियो । सैन्य शक्ति बिस्तारमा जोड दिईरहेको चीनले प्रत्येक बर्ष जस्तो रक्षा बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ । चीनको सैन्य शक्ति विस्तारले अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारको नीति निर्धारण हुने अष्ट्रेलियाली सुरक्षा विज्ञ साम रोजेभीनले बताएका छन् ।
विगत केही बर्षयता सैन्य शक्ति बिस्तारमा जोड दिदै आएको चीन अमेरिका पछि दोस्रो ठुलो रक्षा बजेट छ्ट्याउने देश बन्दै आएको छ । तीस लाख सैन्य बल भएको चीनले विमान बाहक, आणविक पनडुब्बी जस्ता सैन्य सामाग्रीहरुमा जोड दिईरहेको छ । चीनको सैन्य शक्ति विस्तार तथा आधुनिकीकरण अष्ट्रेलियाको मुख्य चासोको बिषय रहेको पनि रोजेभीनले बताएका छन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्यो : एकैदिन थपिए १७ हजार संक्रमित
मार्कोस जुनियरद्वारा फिलिपिन्सको १७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ
रुससँग लड्न जेलिन्स्किीले मागे थप सहयोग
‘सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’
स्वर्गीय पतिको सम्झनामा वीरेन्द्रनगरकी कमलाले बनाइदिइन क्याम्पसलाई भवन
‘सरकारको कारण सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने दिन आउँदैछ’
रोल्पामा बैंकबाट रू. ५ अर्ब ६३ लाख कृषि कर्जा प्रवाह
बुधबारको राशिफल, कस्तो छ तपाईको आज ?
बोटलर्स तराईको कर मूल्यांकन प्रभावित तुल्याउन चलखेल
मंगलबारकाे दिन कस्तो छ तपाईको ?